Japana: Misedra olana ny tolona Sumo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Oktobra 2018 6:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, हिन्दी, English
Volana vitsivitsy henjana teo amin'ny tontolon'ny tolona sumo, “fanatanjahatena nasionaly” Japoney. Voalohany, niverina tao amin'ny tanindrazany ilay mpitolona Mongoliana, Asashoryu, iray amin'ny yokozuna (kilasy ambony indrindra amin'ny tolona) mba ho tsaboina noho ny fikorontanana ara-tsaina vokatry ny fanakianana fa tsy nahavita ny adidiny izy, mody milaza fa marary, ary avy eo niverina tany Mongolia, izay nakàna horonantsary azy teo am-pilalaovany baolina. Nilaza ny sasany tamin'ny fampahalalam-baovao hoe simban'ny firohotry ny “mpitolona vahiny” sy ny “fanatanjahantena nentim-paharazany ao Japana” ny “fanatanjahantenam-pirenena Japoney”.
Betsaka ireo bilaogera niresaka ny fikarakarana natao azy, anisan'izany izy voadaroky ny tavoahangin-dabiera. Ohatra amin'izany ny bilaogera niteny hoe:
Bilaogera Matimulog naneho ny fihetseham-po miely patrana momba ny fahadisoam-panantenana naterak'izany tranga mampalahelo izany mba hanazavana ny olan'ny herisetra amin'ny sumo.
Lohahevitra iray mahaliana ny andraikitry ny Federasiona Sumo. Araka ny nosoratan'ilay bilaogera Shosan no Blog hoe :
Farany, raha nanome tsiny mafy an'i Tokitsukaze, bilaogera Igajin no Tensei Jingo kosa miresaka momba ny ho avy manjavozavo eo amin'ny sumo.